मुलुकको समृद्धी र विकासका लागि राजनीतिमा होमिएका बिनोद चौधरी मुलुकको समृद्धी र विकासका लागि राजनीतिमा होमिएका बिनोद चौधरी Canada Nepal
मुलुकको समृद्धी र विकासका लागि राजनीतिमा होमिएका बिनोद चौधरी
क्यानाडानेपाल डेस्क कार्तिक २४ २०७७
काठमाडौं । विनोद चौधरी, जसको नाम सुन्ने बित्तिकै अर्बपति व्यक्तिको रुपमा हर नेपालीको आँखामा उदाउने गर्छन् । तर, अर्बपति बन्नका लागि उनले गरेका संघर्ष र मिहेनत भने कमैले थाहा पाएका छन् । पर्दामा कलाकारको रोमान्स र हाइफाइको जिन्दगी देखाउन पर्दा बाहिर कति मिहेनत गर्नुपर्छ भने वास्तविक जीवनमा अर्बपति बन्न कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने उदाहारण हुन्, विनोद चौधरी ।
विश्व अर्बपतिको सूचीमा समावेश हुँदा उनी कति खुसी भए, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, उनी आफूमात्रै होइन हरनेपाली अर्बपति बनून् भन्ने कामनामात्रै गर्दैनन् सोहीअनुसार मिहेनत र योजना बुन्छन् । यसैका लागि उनी राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएका छन् ।
राजनीतिक क्षेत्रमा होमिनुको उनको उद्देश्य मन्त्री बन्नु छैन, नेपाल र नेपालीको आर्थिक अवस्था सुधार्नु छ । मुलुक र जनताको समृद्धिको उद्देश्य बोकेर राजनीतिमा होमिएका उनी नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन् । त्यहीँबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा आफूले टेवा पुर्‍याउन सकिने उनमा आत्मविश्वास छ ।
विश्वबजार र विश्व अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका उनी आफ्नो ज्ञान र विवेक प्रयोग गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्ने उत्साह बोकेर राजनीतिमा क्रियाशील रहेका उनीसँग संगत गरेका व्यक्तिहरु बताउने गर्छन् ।
सीजी कम्पनीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा विकास गर्दा विनोदले संगालेका अनुभव नयाँ पुस्तालाई ऊर्जाशील बन्ने गरेको छ । उनी कहिले काहीँ युवा वर्गलाई प्रेरणा र उत्साह प्रदान गर्ने कार्यमा पनि लाग्ने गरेका छन् । निराशलाई आशमा र आलस्यलाई जाँगरमा परिणात गरेर लगनशील भएर आफ्नो कर्ममा होमिए सफलता चम्न सकिने विनोदको अनुभव छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक सही मार्गमा हिँड्नु पर्ने बुझेका उनलाई मुलुकको राजनीतिमा देखिएका खिचातानीले देश र जनतालाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने विषयले कहिले काहीँ चिन्तित् बनाउने गरेको छ । राजनीतिमा हुने बेथेति अन्त्य नै मुलुकको विकास र समृद्धिको सही मार्ग हुने विश्व बजारबाट अनुभव लिएका विनोद नेपाली राजनीतिकको बेथेति पहिल्याउन सफल भएको बताउँछन् । मुलुकको बेथिति अन्त्य गर्न सक्ने क्षमता आफूमा रहेको सुनाउने उनी राजनीति बिग्रियो भने देश नबन्ने ठोकुवा गर्छन् ।
आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई जनता र समृद्धिसँग जोड्ने संकल्प लिएका विनोद मुलुक सिस्टममा चल्नुपर्ने बताउँछन् । विनोद नेतृत्वको सीजी ग्रुप बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ । उनी चाहन्छन्, कांग्रेस पनि आफ्नो लक्ष्य र बाटो तय गरी सीजीजस्तै सिस्टममा चल्न सक्नुपर्छ ।
विश्वबजार र अर्थतन्त्र बुझेका विनोद पार्टीभित्र ओझेलमा परेका छन् । क्षमता र आँट भएकाभन्दा चाप्लुसी गर्नेहरुले अवसर पाउने राजनीतिक वृत्तमा विनोध क्षमता भएर पनि ओझेलमा परेका अर्थविद्हरु बताउने गर्छन् । सीजीको उन्नती र आफू अर्बपतिको सूचीमा पर्न उनले कति पसिना बगाउनु परेको छ, त्यो उनैलाई थाहा होला । तर, संघर्ष र मिहेनतबिना केही हात नलाग्ने उनको बुझाइ छ । कुनै पनि संस्था नाफामा चल्न नेतृत्वमा दुरदर्शीता, दृढ संकल्प र मिहेनत आवश्यक पर्छ । यी नै गुण भएका विनोद मुलुक र जनताको समृद्धिको दृढ संकल्प बोकेर राजनीतिमा होमिएका हुन् ।
तर, उनलाई कांग्रेसले अझै चिन्न नसकेको कांग्रेसभित्रैकै नेताहरु बताउने गर्छन् । यद्यपि, उनी कांग्रेसमा निस्क्रिय भने छैनन् । समस्यामा समाधान देख्ने उनी आफैँ चुनौतीलाई चिरेर अवसर पहिल्याउन सक्छन् । बाधा र अड्चन चिरेर कांग्रेसको अग्रभागमा देखिन थालेका विनोदप्रति मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको आशा धेरैले गरेका छन् । कांग्रेसले मुलुकको विकास र समृद्धि तथा बेथिति राजनीतिको अन्त्यका लागि आफ्नो स्पष्ट भिजन दिन चुकिरहेको अनुभव गरेका विनोद यसमा योगदान गर्ने गरी काम गरिरहेका उनीनिकटका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।
मुलुकको अर्थनीति र यसको कार्यान्वयन गर्न सफल उद्योगी र व्यवसायीहरुको दूरदर्शीता र क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने अर्थविद्हरुले बताइरहँदा कांग्रेसले विनोदजस्ता सफल उद्योगी र व्यवसायी पाएको छ । कांग्रेसले विनोदको क्षमता र दक्षतालाई कसरी उपयोग गर्छ भन्ने सबैले नियालिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी दृढताका साथ समयमै सम्पन्न गर्ने छवि बनाएका विनोदले हात हालेका कुनै पनि योजना असफल भएको नदेखिएको अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् ।
सफलता हात लाग्न नीति र नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्ने अनुभव गरेका उनी गतिशील संगठन र वैचारिक नेतृत्व पार्टी पुनर्जीवनका अनिवार्य शर्त रहेको बताउँछन् । पहिलो संविधान सभामा एमालेका सांसद बन्दा उनीबाट पार्टीले अर्थ नीति बनाउँदा लाभ लिएको पूर्वएमालेका नेताहरुले बताउने गरेका छन् । तर, अहिले कोरोनाभाइरस संक्रमणले थिलथिलो बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न विनोद चौधरीजस्ता सफल उद्योगी र व्यवसायीका अनुभव र ज्ञान राज्यले प्रयोग गर्नुपर्ने अर्थविद्हरुले सार्वजनिक रुपमा भन्ने गरेका छन् ।
कांग्रेसले कोरोनाका कारण प्रभावित लगानी, पूर्वाधार र रोजगारबारे अध्ययन गर्न चौधरीको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको छ । उनी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कोरोनाले थङथिलो बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन कोशेढुङ्गा हुने अपेक्षा गरिएको छ । उनी पार्टीभित्र मात्रै होइन संसदमा पनि अर्थतन्त्रबारेका विचार र रणनीति प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ।
गृहयुद्धमा फसेका मुलुकले अर्थतन्त्रमा गरेका सफलतादेखि टाट पल्टेका उद्योगहरुका कथा प्रत्यक्ष देखेका विनोद कोरोना कहरपछि सही योजनासहित दृढ संकल्प र मिहेनत गरेमा अर्थतन्त्र सुधार्दै समृद्ध नेपाल बनाउन कठिन नहुने बताउँछन् ।
कार्तिक २४, २०७७ सोमवार २०:१०:२० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति देशको मुख्य मुद्दा भएको बताएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा डा. भट्टराईले देशको मुख्य मुद्दा व्यक्ति ओली नभई ओली प्रवृत्ति भएको बताएका हुन् ।
उनले ओली व्यक्तिको रूपमा मनपर्ने मान्छे भए पनि ओली प्रवृत्ति प्रतिगमन, कुशासन र अल्पविकासको मुख्य वाहक भएको बताए ।
डा. भट्टराईले ओली प्रवृत्ति अग्रगमनको मुख्य बाधक भएकोले कुनैपनि वहानामा काधँ थाप्ने गल्ती नगर्न भनेका छन् ।
उनले भनेका छन् - 'आज देशको मुख्य मुद्दा व्यक्ति ओली हैन,ओली प्रवृत्ति हो।व्यक्तिको रूपमा मलाई पनि ओली धेरै मनपर्ने मान्छे हुन्।तर ओली प्रवृत्ति यतिवेला प्रतिगमन,कुशासन,अल्पविकासको मुख्य वाहक हो।अग्रगमनको मुख्य वाधक हो।यो एउटा पार्टीको मुद्दा मात्र हैन।कुनैपनि वहानामा यसलाई काॅध थाप्ने गल्ती नगरौं!'
मंसिर ८, २०७७ सोमवार २०:४७:५६ बजे : प्रकाशित
नेकपा विवादः ओलीले जबाफ दिएपछि सत्तारूढ दल विभाजनको मुखबाट उम्किएला, कि झन् संकटमा पर्ला ?
बीबीसी। प्रधानमन्त्री पनि रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर १३ गतेका लागि तय गरिएको पार्टी बैठकमा पेस गर्ने भनिएको प्रतिवेदनले सङ्कटमा पुगेको पार्टी एकतालाई पुनर्जीवन दिन सक्ने विश्वास नेकपाका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। तर दुवै पक्षले पार्टी विभाजन भए आफ्नो कारणले नभई अर्को पक्षका कारणले हुने भन्दै विद्यमान सङ्कट टरिनसकेको सङ्केत दिएका छन्।
"उहाँ (ओली)ले प्रस्ताव ल्याएपछि प्रस्तावहरूको बीचमा छलफल गरेर जाने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। उहाँले कसरी निकास दिनुहुन्छ भन्नेमा बाँकी कुरा निर्भर रहन्छ," प्रचण्ड निकटस्थ मानिने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
यसअघि मंसिर ३ गतेको बैठकमा प्रचण्ड पक्षसँग रुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे "छिनोफानोका लागि मात्रै" बैठक हुने र ती आरोप गलत ठहरिए अर्का अध्यक्ष (प्रचण्ड) पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए।
"उहाँले छफफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नुभएको भए त्यो हामीले माग गरेकै कुरा भयो, राम्रो भयो। तर पार्टीलाई नै फुटाउने कुरा गर्नुभएको भए त्यो हाम्रो कोणबाट सही हुन सक्दैन, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ," श्रेष्ठले भने। उनी पार्टी प्रवक्ता पनि हुन्।
के नेकपा विभाजनको मुखमा पुगेकै हो त ?
कार्तिक महिनाको अन्तिम साता बसेको बैठकमा प्रचण्डले लिखित रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न उठाएपछि नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। केही समययता शीर्षस्थ नेताहरूले सार्वजनिक माध्यमबाट पार्टी एकता खतरामा रहेको भन्दै नेकपा दुई टुक्रा हुनसक्ने सङ्केत गरेका थिए।
आफूलाई लगाइएका आरोपमा जबाफसहित प्रतिवेदन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय मागेपछि नेकपा विभाजनको खतरा तत्कालका लागि टरेको सरकारभित्र र बाहिर भएका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तर पछि के हुने हो अझ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।
"दुर्घटनातिर जान लागेको परिस्थितिलाई रोकिएको छ। सङ्कट पूरै समाधान भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन," पर्यटनमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने। उनका अनुसार यो बीचमा संवाद र विमर्शका लागि समय प्राप्त भएको छ।
"दुवै अध्यक्षले आ-आफ्ना प्रस्ताव समितिमा ल्याउँछौँ भनेका छन्। त्यसले छलफलको दायरा अझै फराकिलो हुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो।"
प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीबारे तीन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव नेपाल रझलनाथ खनाल तथा अन्य नेताको समूहको असन्तुष्टिसँगै चर्किएको विवादको शृङ्खला त्यति सजिलै नटुङ्गिने सम्भावना विभिन्न नेताहरूको भनाइबाट प्रतविम्बित हुन्छ। दुवै विषयमा पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा आगामी साताहरूमा बहसको तयारी गरिएको छ।
पार्टी फुटे दोष कसको ?
प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टी फुटाउन खोजेको दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। तर आफ्नो पक्षबाट भने नेकपा कुनै हालतमा नफुट्ने दुवै पक्षको दाबी छ। प्रचण्ड निकटस्थ नेता श्रेष्ठ आफूहरू नभई प्रधानमन्त्री ओली नै पार्टी फुटाउन उद्यत देखिएको आरोप लगाउँछन्।
"पहिलो, पार्टी फुट्न वैचारिक राजनीतिक लाइनमा आधारभूत मतभेद भयो र यो पार्टीलाई फेर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा क्रान्तिकारीहरू पुगे भने विद्रोह गर्ने हो, त्यो स्थिति अहिले होइन," उनले भने।
"दोस्रो, सबैले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, मान्दिनँ भन्नेले पार्टी फुटाउँछ," प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिको निर्णय नमानेको विषयलाई इङ्गित गर्दै उनले भने।उता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा नेकपा फुटिहाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने पक्षको कारण फुट्ने बताउँछन्।
"पार्टी फुटाउन आफू लाग्ने अनि प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन लाग्नुभयो भनेर हल्ला गर्ने उहाँहरूको गुरिल्ला शैली हो," उनले कटाक्ष गर्दै भने। "प्रधामन्त्रीलाई पार्टी फुटाउन किन परेको छ? उहाँ पहिलो अध्यक्ष, उहाँको पक्षमा प्राप्त जनादेश छ र देशको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाएर उहाँहरूजस्तो हातमा टोपी लिएर हिँड्नुपर्ने के जरुरी छ?" उनको जिकिर छ। नेकपाको प्रचार विभाग प्रमुख र उपप्रमुख थापा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पक्षबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।
के छ केपी शर्मा ओलीको तयारी ?
प्रत्युत्तरका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न दिइएको १० दिनको अवधिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति सञ्चयको लागि प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का केही नेताहरूको छ। तर उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई समेत पार्टीमा अभिभावकत्व महसुस हुनेगरी "भिन्न उचाइको प्रतिवेदन" आगामी पार्टी बैठकमा ल्याउने तयारी गरेका छन्।
"प्रधानमन्त्री पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रचण्डजीको पनि अभिभावक हो, प्रचण्डजीकै तहमा गालीगलौज र आलोचनाको तहमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुहुन्न," उनले भने "प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रतिवेदन भिन्न उचाइमा आउँछ।" "तर प्रचण्डजीले उठाएका कुरा कृत्रिम छन्, ती नक्कली बहानाबाजीबारे त्यही हिसाबले स्पष्ट पार्ने कुरा हुन्छ।"
प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले सचिवालयमा राखेका दुवै प्रतिवेदन पार्टीका समितिहरूमा छलफल गर्न लैजान चाहेको छ। तर प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई छलफलमा लैजान नदिने मनसायमा ओली छन्।
"पार्टी अध्यक्षलाई गालीगलौज गरेर ल्याइएका कुराहरू तल छलफलमा लैजान मिल्दैन," सल्लाहकार थापा भन्छन्, "ती लाञ्छना र आधारहीन कुराहरु कायमै राखेर जाने अवस्था छैन।"
पार्टीको निर्णायक तहमा असन्तुष्ट पक्षको बहुमत भए पनि सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयहरू दुई अध्यक्ष बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने सहमति पार्टी एकताकै बेला भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा बहुमतबाट मात्रै निर्णय हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
केही नेताहरूले आफू अप्ठ्यारो परे ओलीले संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले त्यसको संभावना क्षीण रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
के छ प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षको तयारी ?
प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको समूह ओलीलाई आत्मालोचनासहित पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न सचिवालय र स्थायी समितिबाट दबाव दिने तयारीमा जुटेको छ। "सकेसम्म सहमतिको निष्कर्ष निकाल्ने नभए पार्टीले भनेको सबैले मान्ने, त्यही हो अबको समाधान," श्रेष्ठले भने।
यो विषय अब सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि जान सक्ने भन्दै उनले भने, "हामी सुरुमै 'बहुमतको निर्णयमा जाऔँ' भन्दैनौँ, तर समिति निर्णयविहीन हुँदैन।" "सहमति भएन भने के निर्णय नै गर्दैन त पार्टीले?" उनको प्रतिप्रश्न छ।
माधव नेपालनजिक मानिने मन्त्री भट्टराई आगामी बैठकबाट विवादको मध्यमार्गी निकास आउन सक्ने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार पार्टी समितिले दुवै अध्यक्षका ठिक कुरा राखेर एउटै प्रतिवेदन बनाउन सक्छ।
"दुईमध्ये एक रोज्ने होइन, दुवैका राम्रा कुरा रोज्ने हुनसक्छ। दुईमध्ये एक रोज्नेतिर बहस गयो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जान सक्छ। पार्टी बहुमत अल्पमतभन्दा पनि तथ्य र सत्यमा जान्छ," उनले भने।
के छ दलभित्रको अवस्था ?
झन्डै अढाई वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि फरकफरक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओली र दाहाल दुवै एकीकृत दलका अध्यक्ष बने। तर अधिकार बाँडफाँटबारे बारम्बार उनीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ।
तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रचण्डसँग नजिक हुँदा नेकपाको शक्तिशाली भनिएको स्थायी समिति र शीर्ष नेताहरू भएको सचिवालय दुवैमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्।
नेपाल पक्षधर नेताहरू ओलीलाई नहटाई सच्चिन दबाव दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि उनको राजीनामा माग्दै आएका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले त्यसलाई थाती राखेका थिए। तर ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने आफ्नो माग यथावत् रहेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए।
यसअघिको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पार्टी नेतृत्व त्याग गर्न परे अहिलेका नेताभन्दा पनि "दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई" हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएका थिए।
तर पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विषय आसन्न महाधिवेशनअघि केवल "सार्वजनिक खपत" का लागि मात्र भन्ने गरिएको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको बुझाइ छ। तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा छ जना पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका नेता रहेको नेकपामा अर्को पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बहस बेलाबेला हुने गरेको छ।
नेकपामा सहमति र विवादको शृङ्खला
असोज १७, २०७४: तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छबुँदे सहमति, निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणा
मंसिर २०७४: प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले-माओवादी केन्द्रको मोर्चालाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत, ६ प्रदेशमा संयुक्त सरकार
फागुन ७, २०७४: एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता अघि बढाउने लगायत सातबुँदे सहमति, एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राख्ने निश्चय
फागुन ७, २०७५: पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा, चुनाव चिह्नआदि विषयमा आठबुँदे निर्णय
जेठ २०७६: आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमतिबारे ओली र प्रचण्डबीच विवाद सुरु
भदौ १, २०७६: पार्टीमा माधव नेपालको तेस्रो वरीयता खोसिएपछि ओली र नेपाल पक्षबीच तिक्तता सुरु
मंसिर ४, २०७६: ओलीले नै पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति, प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष
असोज २५, २०७७: प्रचण्ड निकटस्थ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
कात्तिक ४, २०७७: ओली र प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमतिपछि शाहीविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता
कात्तिक २२, २०७७: पार्टीको बैठक बोलाउन लिखित माग लिएर प्रचण्डपक्षीय नेताहरू बालुवाटार पुगेपछि विवाद उत्कर्षमा
मंसिर ८, २०७७ सोमवार १७:४६:२६ बजे : प्रकाशित
# पार्टी विभाजन
कस्तो छ ओली र प्रचण्ड समूहको तयारी ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवाद साम्य हुने या थप जटिल बन्ने भन्ने आगामी सचिवालय बैठकबाट थाहा हुने भएको छ ।
यही मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे दस्तावेजमार्फज जवाफ दिने भन्दै १० दिनको समय मागेका थिए । सोही मागअनुसार अब सचिवालय बैठक मंसिर १३ गते शनिबार बस्ने भएको छ ।
सो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गर्ने भनिएको प्रतिवेदनले पार्टीको भविष्य कोर्ने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीमाथि लिखित रुपमा गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
जसको आफूले पनि लिखित रुपमै जवाफ दिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आरोप प्रमाणित भए आफू प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट हट्ने र प्रमाणित नभएमा प्रचण्ड अध्यक्षबाट हट्नु पर्ने बताएका छन् । जस कारण अहिले दुवै समूह तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
ओली समूहको तयारी
आफूमाथि लागेको आरोपबारे जवाफ दिने मागिएको १० दिनको समयलाई शक्ति सञ्चयका रुपमा ओलीले लिएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
यही मंसिर ३ बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ लिखित रुपमा दिने र दस्तावेज बनाउन १० दिनको समय मागेका थिए ।
सोहीअनुसार अब १३ गते सचिवालय बैठक बस्दैछ । यस अवधिमा शक्ति सञ्चयदेखि आरोप खण्डन गर्ने उपयुक्त उपाय खोजीमा ओली समूह लागेको छ ।
तर, अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई समेत पार्टीमा अभिभावकत्व महसुस हुनेगरी “भिन्न उचाइको प्रतिवेदन“ आगामी पार्टी बैठकमा ल्याउने तयारी गरेका उनको निजी सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
“प्रधानमन्त्री पार्टीको पहिलो अध्यक्ष र प्रचण्डजीको पनि अभिभावक हो, प्रचण्डजीकै तहमा गालीगलौज र आलोचनाको तहमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुहुन्न,“ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई भने, “प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रतिवेदन भिन्न उचाइमा आउँछ।“
प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा पुष्टि नभए प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि यसको प्रतिरक्षाका लागि प्रचण्ड नेपाल समूहले तयारी गरिरहेका छन् ।
ओलीलाई आत्मालोचनासहित पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न सचिवालय र स्थायी समितिबाट दबाव दिने तयारीमा प्रचण्ड नेपाल समूह जुटेको छ ।
पार्टी विवाद समाधानमा सहमति खोज्ने, तर सहमति नभएमा पार्टीको निर्णय मानेर अघि बढ्नुपर्ने गरी ओली समूहलाई दबाब दिने रणनीतिमा प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी छ ।
मंसिर ८, २०७७ सोमवार १६:५६:३५ बजे : प्रकाशित
के विप्लव समूहबाट राज्यलाई अझै खतरा छ ?
बीबीसी। विप्लव समूह भनेर चिनिने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो साता आफ्नो सातौँ पुनर्गठन दिवस मनाइरहेको छ। राज्यले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पृष्ठभूमिमा सो पार्टीका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु 'स्वाभाविक' नै भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत बताउँछन्।
विगतमा उक्त पार्टीले काठमाण्डू उपत्यकामै मान्छेको ज्यान जाने गरी बम विस्फोट गराएको दृष्टान्त पनि छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 'आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि नसच्याए सरकारले नियन्त्रण गर्ने' चेतावनी दिएका थिए।
हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई वामपन्थीकै सरकार भए पनि 'नछोडिने' भन्दै प्रधानमन्त्रीले 'मान्छे मार्ने गतिविधि गर्नेलाई राजनीतिक दल भन्न नमिल्ने' टिप्पणी गरेका थिए।
चन्दको पार्टीबाट कस्तो खतरा छ ?
बेलाबखत ठाउँठाउँमा विस्फोट गराई भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट अझै सुरक्षा खतरा रहेकोमा नेपाल प्रहरीदेखि सुरक्षा मामिलाका जानकारसम्म सहमत देखिन्छन्। तर सो पार्टीबाट ठूलै सुरक्षा खतरा चाहिँ नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कडायतले सोमवार बीसीसी न्यूज नेपालीसित भने।
"हिजै [आइतवार सो समूहले] उदयपुरमा विस्फोट गराएको छ, चन्दाका कुरा पनि आइरहेका छन्।" "जनतालाई धम्की दिने यस्ता कुरा पनि सुरक्षासँगै जोडिन्छन्। त्यसैले ठूलै मात्रामा सुरक्षा चुनौती त छैन तर सामान्य हिसाबले भन्दा पनि सुरक्षामा त्यसको केही असर त पर्छ नै," उनले थपे। चन्दको नेकपाबाट सुरक्षा खतराको तहबारे प्रवक्ता कडायतको भनाइसँग नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात पनि सहमत देखिन्छन्।
"शान्ति सुव्यवस्थाका लागि चुनौती हो तर राष्ट्रिय सुरक्षामै खतराको रूपमा त्यसलाई म देख्दिनँ,"उनले भने। पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल विद्यमान विधिसँग असहमति राख्ने कुनै पनि समूह वा पार्टी खतराको रूपमा रहने बताउँछन्।
"एकैजना मान्छेको पार्टीले केही समयसम्म अप्ठ्यारो पारेको अनुभव त हामीसँगै छ नि। त्यसो भएर सरकार अथवा उसका सुरक्षा अङ्गहरू सक्रिय हुनु वा सतर्क हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो,"उनी थप्छन्। ठूल्ठूला घटना [हिंसात्मक] नगराए पनि ससाना घटना गराएर राज्यलाई आफ्नो उपस्थिति जनाइरहने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने पूर्वगृहसचिव सिलवालको ठम्याइ छ।
दश वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वसँग जुझेको राज्यले अब कुनै पनि नाममा थप हिंसाका गतिविधि झेल्न नसक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ।पूर्वगृहसचिव सिलवाल र नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बस्न्यात दुवैजना चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सम्बन्धित अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाउँछन्।
मंसिर ८, २०७७ सोमवार १५:१८:०४ बजे : प्रकाशित
# विप्लव समूह
नवनिर्वाचित सांसद पाण्डेले लिए शपथ
काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसद मोहनबहादुर पाण्डेले शपथ लिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सोमबार पाण्डेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
उक्त समारोहमा सभामुख सापकोटाले नवनिर्वाचित सांसद् पाण्डेलाई सघीय संसद्को प्रतीकचिह्न प्रदान गर्दै बधाई दिएका छन् ।
पाण्डेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधन भएपछि रिक्त स्थानमा निर्वाचन आयोगले पाण्डेलाई निर्वाचित गरेको हो ।
मंसिर ८, २०७७ सोमवार १४:५५:०१ बजे : प्रकाशित
# मोहनबहादुर पाण्डे
प्रधानमन्त्री ओली घुन्सामा, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको उद्घाटन
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ घुन्सा पुगेका छन् । उनले आज घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको उद्घाटन गरेका छन् ।
आज बिहान ताप्लेजुङ र इलाम भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्सा फाउण्डेशनद्वारा निर्मित उक्त भवनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
घुन्सा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतका नेताहरु पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज नै चीनसँगको सीमा क्षेत्र ओलाङचुङगोला क्षेत्रको अवलोकन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आज नै काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
मंसिर ८, २०७७ सोमवार १४:२९:२८ बजे : प्रकाशित